छोटो कपडामा सेल्फी, कति सही कति गलत - Naya Pusta
छोटो कपडामा सेल्फी, कति सही कति गलत
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र १७, आईतवार १०:५८
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘बाँदरलाई भर्‍याङ ।’ अहिले डिजिटल पुस्तालाई स्मार्टफोन र त्यसले उपलब्ध गराएको फिचर ‘सेल्फी’ बाँदरलाई भर्‍याङ भएको छ।
जब स्मार्टफोन हातमा हुन्छ, खासगरी तन्नेरीहरु ओंठ चुच्चो बनाएर सेल्फी पोजमा तैनाथ भइहाल्छन् । उनीहरुमाझ सेल्फीको क्रेज कतिसम्म छ भने, यसकै लागि उनीहरु आफुलाई जस्तोसुकै गेटअपमा उतार्न पछि पर्दैनन् । अझ भनौ सेल्फीलाई लिएर उनीहरुबीच एक किसिमको जुहारी नै चल्छ।
सेल्फी खिच्नु वैशालु उमेरको लहड मान्न सकिएला । त्यसलाई नराम्रो भन्ने वा बन्देज गर्ने कुरा आउँदैन । तर, सेल्फी खिच्ने नाममा शरीर देखिने छोटो कपडा पहिरिनु भने पक्कैपनि जटिल विषय हो । किनकी युवतीहरुले आफूले खिचेको यस्ता सेल्फी फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जालमा अपलोड नगरेसम्म उनीहरुलाई चित्त बुझ्दैन । साथै, त्यसमा लाइक तथा कमेन्ट्स नआउञ्जेल पनि उनीहरुलाई धर हुँदैन । उनीहरु सोच्छन्, यस्ता फोटोमा लाइक तथा कमेन्टस् आउनु भनेको साथीभाई बीच चर्चित हुनु हो।
तर साथीभाईबीच चर्चा कमाउने नाममा यस्ता सेल्फीहरु सामाजिक सञ्जालमा अपलोड हुदाँ यसले बेलाबेलामा युवतीमाझ जोखिम पनि निम्त्याउने गर्छ।
विशेषगरी, पछिल्लो समय छोटो लुगाामा खिचिएको सेल्फीकै कारण समाजमा विभिन्न अपराधका घटनाहरु समेत बढ्दै गएका छन् । कतिपय अवस्थामा त यस्ता सेल्फीकै कारण वैवाहिक सम्बन्धमा समेत फाटो आएको छ भने हुन लागेको विवाह समेत टुटेको छ। अझ भनौ , कयौ युवतीहरुका लागि यस्ता सेल्फी पछि गएर गलाको पासो बनेको उदाहरण समेत हामीमाझ प्रशस्तै छन्।
सेल्फी लिदा विशेष कुरामा ध्यान दिने
छोटो कपडा नलगाउने
सेल्फी खिच्दा धेरै युवती छोटो कपडा लगाउन रुचाउँछन् । जबकी कतिपय अवस्थामा छोटो कपडा नै महिलाहरुको लागि गलाको पासो बन्न सक्छ । त्यसैले, सेल्फी खिच्दा यस्तो लुगाको प्रयोग गर्नु गर्छ, जुन हेर्दा सिम्पल हुनुका साथै शरीर ढाकिने किसिमको होस् । जुन शरीर सुहाउदो होस् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : दाँतमा किरा लाग्यो ? यसरी गरौँ उपचार
एकान्तमा सेल्फी लिदाँ विशेष ध्यान दिने
धेरैजसो महिलाहरु सेल्फी लिन भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् । सेल्फी लिने क्रममा उनीहरु यो समेत विर्सन्छन् , कि, म कोसित सेल्फी लिदै छु ? त्यसैले, हरेक पल्ट सेल्फी लिदा म कोसित सेल्फी खिच्दैछु र कहाँ बसेर सेल्फी खिच्दैछु भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ । अन्यथा, एकान्तमा, त्यो पनि छोटो लुगा ब्इफ्रेण्डसित सेल्फी खिच्दा कुन बेला कस्तो अवस्था आईपर्छ थाहा नहुन सक्छ ।
आवश्यक्ता भन्दा विश्वास, हुनसक्छ घातक
प्रायगरी युवतीहरु आफ्नो वायफ्रेण्ड प्रति आवश्यक्ता भन्दा बढी विश्वास गर्छन् । र, व्याइफ्रेण्डका हरेक कुरा उनीहरुलाई सत्य लाग्ने गर्छ । त्यसैले त, आजकलका युवतीहरु आफ्नो व्याईफ्रण्डसित अंकमल गरेर, चिप्किएर विभिन्न पोजमा फोटो खिच्ने गर्छन् ।
जबकी आˆनो प्रेमिकासित मिठोमिठो कुरा गर्ने सबै युवक जिम्मेवार तथा सिरियस नहुन सक्छन् । र, उनीहरुले कुनै पनि बेला तपाईलाई धोका दिन सक्छन् । त्यसैले, व्याईफ्रेण्ड भन्दैमा उसलाई आफ्नो सर्वस्व दिनु उचित नहुनसक्छ ।
आपनो फोनबाट मात्रै सेल्फी लिने
सेल्फी लिदाँ जहिलेपनि आˆनै फोनको मात्र प्रयोग गरौ । व्याईफ्रेण्डको मोबाइलबाट कदापी सेल्फी नखिचौ । साथै, वायफ्रेण्डलाई आफ्नो सेल्फी ह्वाट्एप पनि नगरौ । किनकी कहिलेकाही आवेग तथा व्यक्तिगत रिसइविईका कारण त्यस्ता सेल्फी भाइरल हुनसक्दछ । जसका कारण समाजमा तपाईको प्रतिष्ठामा आँच पुग्न सक्छ ।
आफूभन्दा ठूलासित कुरा नलुकाउने
तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? कहाँ जादै हुनुहुन्छ ? कोसित जाँदै हुनुहुन्छ ? तथा कोसित सेल्फी खिच्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आˆना अभिभावकलाई बताउन जरुरी छ। ता कि उनीहरुले तपाई सही सुझाव दिन सकुन । किनकी तपाईको बारेमा तपाईलाई भन्दा तपाईको अभिभावकलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ । उनीहरुले नै तपाईको लागि के सही हो र के गलत हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्छन् । र, सल्लाह, सुझाव पनि त्यसै अनुसार दिनुका साथै आवश्यक परेको खण्डमा जटिल भन्दा जटिल समस्याबाट पनि उनीहरुले नै तपाईलाई बाहिर निकाल्न सक्छन्।
के तपाई सेक्स भन्दा बढी खानेकुराको बारेमा सोच्नुहुन्छ ?
टन्सिलको समस्याबाट हैरान हुनुभयो ? यी उपाय अप्नाउनुहोस्
के तपाई परीक्षाको समयमा मात्र पढ्नु हुन्छ ? उसो भए अप्नाउनुहोस् यी टिप्स
कपालमा आउने हरेक समस्याको समाधानका लागि प्रयोग गर्नुहोस् घ्यू
तालु खुइलिने समस्या छ ? यस्तो छ समाधान गर्ने घरेलु उपाय